Kunzima overestimate kanjani esisemqoka navigation izinhlelo emphakathini wanamuhla ephathekayo, nasezintweni zobuchwepheshe zamuva ezithandwayo kusistimu yokusebenza "Android". Izinto Zibe Lula Futhi lula ukusetshenziswa - lena umbandela esiyinhloko ukuhlolwa omuhle zohlelo lokuhamba for "Android".
Cishe zonke omunye opharetha mobile kanye izinjini ikupha. Isizathu kwaba ukuthi ukufuneka omkhulu izinhlelo ezinjalo kuye kwabangela ukuba lenqwaba iziphakamiso kanye ngesicelo "Ukuzulazula ngokuba" Android "." Ngokwesibonelo, omunye opharetha abadumile inikeza bamasizo ngohlelo "MegaFon-navigation". Kephi khulula ku-net, futhi ngensimbi ngaphansi kwezimo apharathasi ezidingekayo futhi preinstalled. Ezicini ezinhle imisebenzi enjalo, ziningi, kodwa kusukela nemibi yilezi ezilandelayo: ukunemba kuncike ukusondela zemibhoshongo yeselula, ngokushesha ilahlekelwa Ukushaja ibhethri ye igajethi, uxhumano saziso ukuze inkampani wesevisi ye-inthanethi, futhi okubaluleke kakhulu, khona njalo kule inethiwekhi "megaphone". Ukuze ababhalisile traffic nezinye opharetha 'Liyindawo okusezingeni eliphezulu.
Ngakusasa omele bhá zohlelo "Ukuzulazula ngokuba" Android "," kukhona "Amamephu" injini yokusesha ye-Google. Baziwa ukuthi unikeza ulwazi olucacile cishe embulungeni yonke. Njengomthetho, kahle ezinemininingwane izinto imigwaqo eduze, kuyilapho asele endaweni afanayo ngokudubula kumasathelayithi. Ngesikhathi esifanayo it has ithuba kwimodi inthanethi, ukuhlinzeka uhlu olubanzi amasevisi. Nebubi: isibuyekezo amakhadi ezingavamile ngenxa imininingwane okusezingeni eliphezulu, high kwamaloli nezimoto uma zidlula. I ethile eyinhloko - ngaso sonke isikhathi isebenze kahle ngoba isicelo ngokutholakala beta. Kakhulu kangakanani ethandwa wathola isimiso esinjalo lokuhamba for "Android" ngokuthi "Imigwaqo Seven», MapFactor nabanye abaningi.
I lemisiwe Uhlelo
On siphi isici waqondisa abantu ukukhetha kanye nokuhlola izinhlelo, elaba isisekelo lokuhamba for the "Android"?
Umkhiqizo Ngentengo isofthiwe eyengeziwe.
The kungenzeka kuvuleke umzila yingasiphi wonke.
Ukulungiswa Automatic umzila.
Amandla ukusebenza ukudluliswa real-time ulwazi mayelana ukugcwaliswa traffic ukunyakaza.
Isizinda ulwazi amaphrojekthi.
Imininingwane engeziwe indawo, isivinini kanye ukushayela isikhathi esiqondile.
Ithuba bajwayelane Isibikezelo sezulu.
Imininingwane Exchange nabanye abasebenzisi.
Navigation ngenkathi ungekho kulayini
Phakathi izinhlelo ethandwa kakhulu, iziqondiso, ukunakekelwa okukhethekile kufanele zikhokhelwe isigaba "Ukuzulazula ngaphandle Inthanethi" ukuze "Android". Ngokwesibonelo, khulula usizo Uhlelo benethuba ukuyisebenzisa kwimodi okungaxhunyiwe - 2GIS. Forte, edonsa abasebenzisi poadresnaya, enemininingwane, ulwazi amamephu cwaningo lwenziwa 2D - futhi 3D-mode. Imininingwane yamanje owodwa ebuka into ngayinye. navigation Modern ngaphandle internet "Android" walala-amadivayisi ivumela umzila enemininingwane kusikhungo sosizo ukuze iphuzu oyifunayo eqondene nabahamba ngezinyawo kubashayeli. Russia noma phesheya izinhlelo khulula namabalazwe edolobheni. Yiqiniso, akuwona 2GIS nto inazo zonke izici isiphequluli egcwele, kodwa umsebenzi, niphumule enemininingwane uhlelo lwayo Imininingwane lubaluleke.
In the mode inthanethi,
Isisekelo Ukucabangela 'wezinsika' elandelayo, okuyinto ngesisekelo lokuhamba for the "Android" kwaba Ukulingana okufanele kakhulu nenqubo oludingekayo kanye nenani elikhulu omuhle ekubuyekezeni komsebenzisi.
"Yandex Navigator" ukuze "Android"
Uhlelo elinesimo amabalazwe olunembile kakhulu nge ikhono self-uyakekela futhi screen umsebenzisi-ngamakhasimende igajethi. I onjiniyela zinakekelwe mayelana induduzo, ukungeza umsebenzi "imodi yasebusuku." Kuyasiza ngedatha okufakwayo ngezwi kanye okubonisa kokubili iziphuphutheki kanye igajethi ibhethri. Izici Key:
Mahhala hlelo, kungenzeka yokuvuselela.
ibalazwe eningiliziwe nge umzila hhayi kuphela yizinqola ezizimele, kodwa futhi umphakathi.
Imininingwane Qedela mayelana nesimo umgwaqo okwamanje: kukakhokho, radar, imisebenzi emgwaqweni, njll ...
Ukucinga amabhizinisi, amagalaji, ATM, kanye nezinye izinhlangano zomphakathi.
Isibikezelo sezulu, izindaba, ulwazi olwengeziwe, futhi wengxoxo etholakalayo.
"Progorod". Navigation for the "Android"
Umsebenzi eziyingqayizivele "ngokoqobo augmented" kunjengoba nje elula njengoba yakhelwe, ukhululekile ukufunda amakhadi eziningi imininingwane traffic. Volumetric 3D izinto isithombe-mgwaqo. Amaphuzu ayisihluthulelo:
Uhlelo mahhala ngenyanga. Amamephu ikhokhwe, ngaphandle Amacebo esifundeni.
Lapho ukulayishwa kuba nokwenzeka Ishintsha umzila.
Intelligent ukulungiswa umzila ngokukhetha izinketho.
Amandla ukusebenza kokubili kwimodi okungaxhunyiwe ku-intanethi ku-intanethi ukuqapha ukuhamba traffic.
Thola izinto samanje.
Iveza igajethi esikrinini lonke nomkhakha we idatha ezengeziwe.
"Navitel". Navigator ngoba "Android"
Uhlelo ikhokhelwa, futhi wonke updates mahhala. A plus elikhulu - namaqiniso 3D-mode. Izici Key:
amabalazwe eningiliziwe (Nokho, kwabuye), etholakala inkumbulo igajethi, nge ikhono ukusebenza izindlela kokubili inthanethi kokungaxhunyiwe. Ukuzibusa ngaphandle kuzula kanye opharetha mobile.
Ikhono oyifisayo isaziso izwi umzila ukulungiswa.
Imininingwane engeziwe enemininingwane.
Amasevisi "Navitel" - sezulu, i-SMS, abangane, izenzakalo.
"SitiGid" futhi Sygic navigation-elisho "Android". Imali Yohlelo, kodwa abe inqwaba abalandeli. Nokho, "SitiGid" kuhilela ukusebenza amabalazwe Russia futhi unalo ikhono ukufaka amabalazwe third-party futhi Sygic «ngensimbi» ngaphansi Europe.
Kuyinto cishe akunakwenzeka ukuthola ukuthi uhlelo ekahle. navigation ongcono -devices "Android" - nguye ohlangabezana nezidingo zakho. Wonke umuntu elomela ukuthenga "Android", ingakhethwa njengoba esibonakalayo design efanelekayo, futhi ngokucacile okwengeziwe okudingekayo.
Kuyini TCP, noma kanjani ukukuvikela enkohlisweni?